“Dalka Aan Dartii Nafteyda Halista U Geliyay Beri Wuu I Musaafurin Karaa” | Aftahan News
“Dalka Aan Dartii Nafteyda Halista U Geliyay Beri Wuu I Musaafurin Karaa”
Washintong (Aftahannews)-Maxkamadda ugu sareysa dalka Mareykanka ayaa ka dib u eegeysa kiis halis galin kara kumannaan qof oo iyaga oo carruur ah dalka Maraeykanka ku soo galay sharci daro, kuwaasi oo imika wajihi kara in dalka laga musaafuriyo.
Sharciga loo yaqaanno Dreamers Act ee dhiirigalinta dadka hamiga leh ayaa la ansixiyay 2012 waxaa uuna dhalinyarada fursad u siinayaan in si sharci ah Mareykanka ay wax kaga bartaan kagana shaqeeystaan.
Balse Madaxwayne Donold Trump ayaa imika doonaya in sharcigaasi la laalo.Qaar ka mid ah dadka wajahaya halista ah in dalka laga musaafuriyo waxaa ka mid ah shaqaale caafimaad oo hadda ka mid ah dhakhaatiirta la tacaalaysa cudurka Corona ee faraha ba’an ku haya Mareykanka.Bilowgii bishii April, gawaari booliis ah ayaa isku gadaamay cusbataalka Winston-Salem, ee North Carolina.
Waxay xilligaas booliiska sheegeen inay ahayd mid loogu mahadnaqayay shaqaalaha caafimaadka ee naftooda halista u galiyay daaweynta bukaanada qaba fayraska Covid-19.Balse Jonathan Vargas Andres, oo ah kalkaaliye ka howlgala qeybta xaaladaha culus ee ICU loo yaqaanno islamarkana la tacaalaya bukaanadda cudurka Corona ayaa waxay arrintan u ahayd farxad aan dhameystirneyn.
Waxaa uu qeybta xaaladaha culus ee ICU ka shaqeynayay afartii sano ee la soo dhaafay.Jonathan Vargas xaaskiisa iyo walaalkii ayey sidoo kale ay ka wada shaqeeyaan isla goobtaasi, waxayna toddobaadyadii ugu dambeeyay dareemayeen sare u kaca tirada uu soo ritay Covid-19 ee u baahan gargaarka deg-degga ah.
Jonathan ma haysto wax sharci ah, dhowrka toddobaad ee soo socotana wuxuu kala ogaan doonaa in dalka uu naftiisa halista u galiyay uu go’aansan doono in la musaafuriyo iyo in kale.“Waxaan isku dayay in aanan arrintan ka fikirin sababtoo ah haddii aan in badan ka fikiro daal ayaan dareemaya,” ayuu yiri Jonathan. “Waa in aan arrintan maskaxda ka saaro aniga oo caafimaadkeyga u daneynaya.”Waa mid wax walba ka cabsi badan.” Ayuu intaa ku daray.
Sharciga dhiirigalinta dadka hamiga leh, Jonathan waxaa uu ka mid yahay dadkii ka faa’ideystay sharcigan fursadda siiyay caruurta sida sharci darada ah Mareykanka lagu soo geliyay.Waxaa sharcigan la ansixiyay xilligii uu madaxwayne Mareykanka ka ahaa Brack Obama ee 2012.
Waxaa uu sharcigan Dreamers Act difaacayaa dadka da’a yarta ah ee iyaga oo carruur ah la geeyay Mareykanka.Wuxuu sharcigan u ogolaanayay in la siiyo ogolaanshiyo ay wax ku baran karaan kuna shaqeysan karaan.Jonathan waxaa uu ka yimid dalka Mexico isaga oo ay da’diisu ahayd 12 sano jir.
Sannadkii 2017, madaxwayne Donald Trump ayaa barnaamijkan joojiyay waxaana hadda darsaya maxkamada ugu sareysa dalka Mareykanka.Wakhati kasta ayuu Jonathan filayaa in loo sheego in uusan xaq u lahayn in uu Mareykanka ka shaqeeya ama ku nooolaado.Dadka ka faa’ideystay sharcigan Dhiirigalinaya dadka hamiga leh waxaa tiradooda lagu qiyaasay 800,000 oo qof.
Xarunta hormarinta Mareykanka ayaa ku qiyaastay in 29,000 ka mid ah dadkan ay yihiin shaqaale cafimaad oo isugu jira dhakhaatiir, kalkaaliyayaal caafimaad iyo sidoo kale 12,900 oo iyaguna ka shaqeeya qeybaha kale ee caafimaadka.Jonathan ayaa shaqdiisa ku tilmaamay mid rejo wanaagsan uu ka qabo.
Waxaa uu waligii jeclaa in uu noqdo kalkaaliye caafimaad iyada oo ay jirto in safmarka Corona uu ku soo beegmay xilliu aad loogu baahan yahay xirfadan uu afarta sano ku jiray.
“Xaqiqadii waa mid cabsi leh markaad goobtan ku sugan tahay wax walba oo aad taabato waad ka shakinaysaa,” ayuu yidhi”Balse cabsidaasi waa in aad meel aad iska dhigtaa sababtoo ah waxaad isbataalka u joogtaa inaad dadka caawiso,” ayuu intaa ku daray.